Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada in Nexus
Just helay aan Nexus cusub 4 shalay iyo waxaan hadda ahay in geeddi-socodka laftiisa configuring. Mid ka mid ah wax Waxaan doonayaa in aan ugu dhakhsaha badan sameeyo waa in lagu beddelan oo dhan xiriirada aan ka badan. Si kastaba ha ahaatee waxaan leeyihiin iyaga ku kaydsan card ballaarinta on my Ace. Sida Nexus ah aysan heysan hal sidee guud ahaan iyaga oo aad u gudbiyaan?
Ma ahan heshiis weyn si ay u gudbiyaan xiriirada si Nexus 4. No arrinta haddii aad rabto in aad ka phone duug ah, ama faylasha vCard, Outlook, Gmail, ama kuwo kale lagu wareejiyo xiriiro, waxaad ku samayn kartaa. Qaybta soo socda uu kuu sheegayaa laba siyaabood oo kaa caawinaya in aad u gudbiyaan xiriirada si aad Nexus 4 effortlessly.
Habka 1: xiriirada Transfer ka telefoonka ah in Nexus 4
Habka 2: xiriirada Nuqul ka file vCard, Gmail, Outlook, iCloud in Nexus 4
Just iska beddelaan telefoonka ah oo gaboobay in Nexus 4? Si aad u wareejin xiriir u dhaxeeya, uma baahnid inaad u leeyihiin in ay u dhoofiyaan xiriirada ka phone hore ka dibna helo habab uu siiyo Nexus 4. Halkii, waxaad samayn kartaa waa sida ugu fudud ee garaacid badhan oo kaliya hal mar, marka la isticmaalayo Wondershare MobileTrans . Software ugu fiican waa xirfad aad loogu talagalay si ay u gudbiyaan xiriirada ka phone Nokia ah, telefoonka ah Android ama xataa iPhone, iPad, iPod taabto si Nexus 4 1 click.
Download version maxkamad free kombiyuutarka iyo bilaabaan si ay u gudbiyaan xiriirada si Nexus 4.
Tallaabada 1. Connect Nexus 4 iyo telefoonka kale in kombiyuutarka
Orod software ah oo ay isticmaalaan xargo USB in ay ku xidhmaan Nexus 4 iyo telefoonka kale in kombiyuutarka. Marka xidhiidhka ka guuleysto, software si toos ah iyaga lagu ogaan doonaa ka dibna aan u muujiyo in uu furmo suuqa hoose.
Ku rakib Lugood kombiyuutarka marka aad go'aansato in aad wareejiso xiriirada ka iPhone in Nexus 4 .
Tallaabada 2. dhaqaaq xiriirada si Nexus 4 telefoonka
Just sii xiriir la hubiyaa iyo riix Start Copy . Wondershare MobileTrans Wuxuu bilaabaa in uu Nexus 4. wareejinta xiriirada Ha xusuusan in barkinta Ama telefoon ka hor inta suuqa kala iibsiga xiriir la soo gabagabeeyo.
Sidee baad u soo dhoofsadaan laga yaabaa in ay xiriir Nexus 4 marka kaliya Nexus 4 dhow dahay? Xaaladdan oo kale, waxaad isku dayi kartaa Wondershare MobileGo for Android . Waa tababare Android, caawiyay aad ku wareejin xiriirada ka Outlook, iCloud, Gmail, Windows Cinwaanka Book, Windows Live Mail iyo file vCard in aad Nexus 4 si fudud.
Download Wondershare MobileGo for Android iyo hubi tallaabooyinka fudud.
Tallaabada 1. Isku aad Nexus 4 ilaa kombiyuutarka wirelessly ama via cable USB
Si aad u samayso xiriir via WiFi markii ugu horeysay, waxaad u baahan tahay inaad soo dajiyo file MobileGo APK aad Neuxs 4 . Haddii aad jeceshahay in ay ku xidhmaan aad Nexus 4 la cable USB ah, ee file MobileGo APK la rakibi doonaa si toos ah aad Nexus 4.
Marka xiran, aad Nexus 4 muuqataa in uu furmo suuqa hoose, iyadoo files ay kala saaraa khaanadda bidix.
Tallaabada 2. Nuqul xiriirada si Nexus 4
Ka dib markii gujinaya Xiriirada khaanadda tagay, la xiriir oo dhan, oo ay ku jiraan kuwa badbaadiyey ee Gmail, Facebook, Twitter oo dheeraad ah, waxa ay muujinaysaa ilaa uu goluhu xaq. Riix Import / dhoofinta . Liiska hoos-hoos A booda-up, dooro xiriirada Import ka computer . Markaas, aad leedahay shan doorasho, ka file vCard , ka Outlook Express , ka Outlook 2003/2007/2010/2013 , ka Windows Cinwaanka Kitaabka iyo ka Windows Live Mail . Dooro mid oo ka soo dhoofsadaan xiriir ah.
Si aad u gudbiyaan xiriirada iCloud in Nexus 4, aad dhoofin karo xiriirada iCloud in kaarka VCF ah iyo u isticmaalaan si ay u dajiyaan Wondershare MobileGo for Android in aad Necus 4. More info oo ku saabsan ka iCloud wareejinta xiriirada si Nexus 4 .
Fiiro gaar ah: Haddii aad saxiixdo in xisaabaadka sida Gmail, Facebook, Twitter on Nexus 4, xiriirada la soo bandhigi doonaa in ay suuqa kala xiriir aad. Markaas, waxaad iyaga kartaa inaad u guurto kaadhka xusuusta telefoonka ama kaarka SIM.
> Resource > Transfer > Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada in Nexus 4